Zvirongwa zvitsva zveiyo iPhone 7 izvo zvaizosimbisa mutauri wechipiri | IPhone nhau
New iPhone 7 schematics inoonekwa iyo inosimbisa mutauri wechipiri
Nezuro takaburitsa chinyorwa mairi taigona kuona inofungidzirwa kumashure kweiyo iPhone 7. Mumufananidzo iwoyo takaona zvinhu zvisina kuenderana nerunyerekupe rwatiri kuona mazuva ano, senge ringi yaidzivirira kamera iyo yaisafanira kuve iriko, asi nhasi nyowani iwo akaonekwa mifananidzo muchimiro chemadigiramu ayo, zvakare, anoratidza izvo izvo iPhone 7 kesi uye iyo iPhone 7 Plus / Pro.
Mifananidzo yacho yakaonekwa paWeChat, asi chinhu chakakosha ndechekuti yakadzokorora NoWhereElse (kwaunonyora OnLeaks) uye kuti isu tinoona chimwe chinhu icho isu tanga tisina kuona mune imwe schema inodonha: pazasi pane vatauri vaviri uye hapana chimwe chakadai kubvira iyo yekutanga iPhone. Ichi chinhu chinofanana nesvikiro reFrance yakabudiswa wekupedzisira June 25, asi izvo zvatiinazvo nhasi hazvisi zvekumisidzana, asi mamwe masystem kana inopa kubva kune imwechete kumashure casing.
Zvirongwa zvitsva zveiyo iPhone 7
Kune zvese zvimwe zvinhu, zvekutanga zvakasimbiswa inopa, izvo zvisiri izvo kuti vaive vakaipa, dai zvisiri izvo Apple yaiyedza mamodheru maviri akasiyana uye ingadai yakazopedzisira yasarudza pane imwe ine ma speaker maviri. Neizvi zvakatsanangurwa, mitsara yeiyo antenna iri kumusoro uye ezasi mativi uye iwo makamera ari maviri akakurisa. Sekureva kweimwe runyerekupe, iyo iPhone 7 kamera ichave 21mpx, nepo iyo iPhone 7 Plus / Pro kamera ichave 12 + 12Mpx. Iko hakuna zvakare 3.5mm headphone chiteshi. Kune rimwe divi, ndichiitarisa, ndinowana kunzwa kuti iyo ID ID iri mukati mukati, izvo zvaizoreva kuti yaisazobata bata.
Nekusataura nezve saizi, iyi madhayagiramu haigone kusimbisa kana kuramba kuti kuchave nemhando nhatu dzakasiyana, ndokuti, 4.7-inch modhi ine yakajairwa kamera, 5.5-inch modhi zvakare ine imwechete lens uye 5.5-inch Pro modhi ine ikozvino inozivikanwa mbiri kamera. Kunyangwe ruzivo senge nhasi ruchiramba ruchioneka, kuti tibve mukukahadzika kwese tichafanirwa kumirira kusvika munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » New iPhone 7 schematics inoonekwa iyo inosimbisa mutauri wechipiri
Voice sahwira Pro, yemahara kwenguva shoma
Iyo Skype application inokutendera iwe kutumira mafaira anosvika mazana matatu MB